Torohevitra hitazonana ny tononkira milay tonga lafatra | Bezzia
Torohevitra hitazomana ny tonony feno blonda
Manana volo miloko mety ho nofy na nofy ratsy. Betsaka ny voalaza momba ny volo blonda, fa kely fotsiny ny fahafoizan-tenan'izy ireo. Na volo miloko voajanahary, miloko na misongadina dia misy fikarakarana fototra izay tsy tokony hotadidintsika.
1 Shampoo volomparasy / shampoo manga
3 Chamomile ho an'ny loko voajanahary
Shampoo volomparasy / shampoo manga
ireo shampoos volomparasy ny manokana ho an'ny volo blonda. Ny maha-manam-pahaizana azy ireo dia tsy midika hoe manana vidiny lafo izy ireo. Toy ny amin'ny vokatra rehetra dia afaka mahita karazany isika ao amin'ireo faritra.
Fa inona ny shampoo volomparasy? Eny, izy ireo no shampoos izay ampiasaina amin'ny volo fotsy. Hoy ny manam-pahaizana: “To tazomy ny aloky ny volo miloko fahazoan-dàlana hampiasa shampoo volondavenona izahay. Ireo vokatra ireo dia afaka manala amin'ny fomba mahomby ny taratra mavo amin'ny volo nolokoana, mitahiry ny tonony mangatsiatsiaka tsara. Esory ny fisaintsainana mavo ary makà volo miloko platinum tsara tarehy! "
Ny marika Loha mainty manana vokatra matihanina izay afaka miantoka ny fitahirizana tonga lafatra. Ho fanampin'izay, amin'ireo vokatra vokariny dia hitantsika ny volo vita amin'ny loko na voajanahary.
Matetika, volo blonda no fanolanana. Izany no mahatonga ny volo ho simba ary mila fikarakarana sy hydration be dia be izy io. Noho izany, tsy tokony hohadinointsika mihitsy ny fampiharana ny sarontava, ary koa serum amin'ny toro-hevitra. Raha manana volo isika blonde voajanahary, ny zavatra mora indrindra dia ny fananantsika volo tena tsara. Mora vaky be ny volo madinidinika. Izany dia miteraka fisarahana ny tendrony na tsy ahazoantsika habetsahana betsaka.
Raha jerena izany, ny tsara indrindra azontsika atao dia ny manosotra saron-tava mando sy manamboatra. Afaka mahita ireo manokana ho an'ny volo blonda isika. Ary avelao ny mana maina voajanahary. Izany hoe, arakaraka ny hampihena ny fanamainana anaovantsika no tsara kokoa. Toy izany koa ny tweezers na vy. Ny loharanon'ny hafanana mivantana dia tsy mety amin'ny volo izay tena tsara na efa simba amin'ny famotsiana.
Ary koa, andeha hojerentsika raha manana loko volondavenona efa nolokoana isika. Izany hoe mampiditra loko mandoko na mamontsina ny volo izay efa niaritra fanoherana isika. Ka ny manalefaka sy manamboatra fitsaboana tena ilaina izy ireo amin'ireny tranga ireny.
Chamomile ho an'ny loko voajanahary
Ny volo blonde voajanahary dia sarotra hotehirizina. Ka ny ankamaroan'ny olona teraka volo volo dia mila mitazona izany amin'ny vokatra manokana. Ny vokatra tena atolotra dia chamomile. Ankoatry ny maha-vokatra mahavelona sy mahavelona azy dia mpiara-miombon'antoka tsara ihany koa izy io mba hitazomana loko fotsy voajanahary. Raha mampiasa ireo lotion na shampoos ireo isika dia hahazo a endrika voajanahary sy maharitra kokoa.
Ho fanampin'izay, ny volo blonda mazàna dia manana endrika mikorisa. Izany hoe tsy homogeneous izy io. Azontsika atao izany amin'ny alàlan'ny fanasongadinana, fa miaraka amin'ireo vokatra ireo izay manamaivana voajanahary. Raha ny marina dia misy zavatra tena tsara amin'ny volonao apetraka chamomile. Eny, chamomile nampidirina. Manamboatra fampidirana chamomile tena mifantoka be izahay; Hiankina amin'ny halavan'ny volontsika izany, ary koa amin'ny haben'ny volo ananantsika. Miandry ny rano izay anaovantsika ny chamomile infusion ho tezitra ary apetaka amin'ny hodi-doha, mandra-poka ny tendrony. Avelantsika hanan-kery izany mandra-paharitry azy. Ny tsara indrindra dia miandry amin'ny masoandro vao maina. Ary avy eo manasa ny volontsika isika. Ka hahazo a volo miloko mamirapiratra, misy valiny tsy mampino.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Torohevitra hitazomana ny tonony feno blonda
Inona no hatao raha manana fanaintainana miverina matetika ianao
Karazana dingana ho an'ny fampiofanana anao